Akụkọ ụlọ ọrụ - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
- NKWUKWU NDEN-
Disemba 2019 ~ Jenụwarị 2020
Mgbe ndị mmadụ n’ofe obodo ji obi ụtọ na-akwado maka afọ ọhụrụ commodi-agbatị, a agha nwayọọ nwayọọ na-abịa ụwa, Ibulite gafee ala dum china. N’otu oge, ọtụtụ ndị butere ọrịa ahụ, mba ahụ dum nọ na-atụ ụjọ. anyi malitere igbochi oria ojoo, ma akpọchi ndi mmadu niile.
Mmalite Jenụwarị 2020
Ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ nwere nchegbu gbasara mmepe nke ọnọdụ ọrịa. Companylọ ọrụ ahụ gbasara nne nna na ndị mmadụ. N'ihe banyere ntiwapụ nke ọrịa, e nwere ndị dọkịta na ndị nọọsụ na-eyi uwe ọcha na mpaghara ọ bụla ma na-alaghachi, VoW iji merie agha ahụ.
Ọnwa nke mbụ Jenụwarị 202
Ọrịa ahụ malitekwara. Agbanyeghị ， mba a niile na-alụ ọgụ tinyere obi na mkpụrụ obi anyị. Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla n'otu akụkụ, ọ ga-akwado ya n'akụkụ niile. Ndị ọkachamara ahụike gwara gị na mkpuchi mkpuchi nwere ike igbochi ọrịa ahụ - ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ chọkwara isonye na ọgụ ahụ megide ọrịa ahụ ma na-etinye oke onyinye na agha ahụ
Ọgwụgwụ nke Jenụwarị 2020
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịgbanwe atụmatụ azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ n'afọ na-esote. O jiri ego ejiri na mbụ gbasaa osisi na osisi maka ịpụ apụ na-ezighi ezi ， nhicha osisi maka imepụta ihe nkpuchi ， na ejirila ego iji zụta igwe ọhụrụ na ihe eji emepụta ihe. anyi choro inye aka buso oria ojoo a agha. Mgbe ahụ ụlọ ọrụ ahụ dum malitere ịkwadebe maka ibuso ọrịa ọgụ.
Mmalite February 2020
Anyị akwadebela ihe niile a na-emepụta ihe na-emepụta ihe, na igwe na-eme ihe nkpuchi ahụ edepụtara nke ọma, Ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị niile kwadebere ịmịpụta ihe nkpuchi maka ịlụ ọgụ nke ọrịa ahụ.
11nke Febụwarị 2020
Anshun ike na ọgwụ teknụzụ Co., Ltd. e eze ikeb companylọ ọrụ ahụ enwetawo ọgwụ ọgwụ ， mmepụta ikike ， ikike ikike, etC.
Mid ọnwa nke February 2020
Ngwongwo nke nkpuchi nkpuchi mbu batara na ulo oru ， ma anyi malitere imeputa ihe nkpuchi ihu eji eji agha agha.
Ihe nkpuchi nwere ike ikpuchi ekpuchi na nkpuchi Kn95 nke AKF meputara tozuru oke dika uzo nyocha GB2626- 2006.
Ihe nkpuchi nwere ike wepu nke AKF nwetara asambodo asambodo CE. Ihe nkpuchi Kn95 nke AKF meputara enwetala asambodo nke OA.
N'okpuru nduzi nke onye isi ahụ, ụlọ ọrụ ahụ abawanyela usoro mmepụta ma na-ebupụkwa ihe nchebe na-ebuso ọrịa ntiwapụ na-aga n'ihu. Ihe nkpuchi anyị arụ ọrụ dị mkpa na china dum.
Ọgwụgwụ nke March 2020
Ike imepụta anyị abawanyela site na puku iri puku mbụ wee ruo 300-500 puku / ụbọchị ugbu a, ikike nrụpụta ka na-eto。。MKF anyị ejirila ọtụtụ ihe n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, en-terprises, ụlọ ọgwụ ， ebe ọrịa na-efe efe na ihe ndị ọzọ.
Companylọ ọrụ anyị malitere ịnabata ndị ahịa mbupụ, yana ụfọdụ onyinye ụlọ domestic N'oge na-adịghị anya, a chọtala ngwaahịa nkpuchi AKF n'ọtụtụ mba na mpaghara gburugburu ụwa, gụnyere Europe, Germany, United Kingdom, Australia ， Russia, Hong Kong , wdg Ọ rụrụ ọrụ dị mkpa n'oge ntiwapụ nke ọrịa.
Nwere ike 2020
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ China kwụsiri ike ， mana anyị enweghị ike ịkwụsị usoro mmepụta anyị, yana enweghị ike izu ike izute ọrịa ahụ. Anyi choro inyere umuaka na umuaka ndi si na gburugburu uwa aka ibuso oria a agha. Ọdịnihu ga-aka mma.